Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban oo war cusub kasoo saaray arrimaha doorashada dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban oo war cusub kasoo saaray arrimaha doorashada dalka
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Cumar Maxamed Cabdulle (Cumar Dhageey) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa si faah faahsan uga hadlay waxyaabaha ilaa iyo haatan ka qabsoomay doorashada iyo sidoo kale dib u dhaca ku yimid tan madaxweynaha Soomaaliya.
Wuxuu guddoomiye Dhageey marka hore ka hadlay tirada xildhibaan oo ilaa iyo haatan lagu doortay maamul goboleedyadda dalka, wuxuuna sheegay in qeybta badan ee kuraasta xildhibaanadaasi la doortay balse ay harsan yihiin oo kaliya tiro yar.
Guddoomiye Cumar Dhageey oo mar ka hadlay kuraasta lagu muransan yahay ee Aqalka hoose ayaa sheegay in hadii ay cadaato eedeymahaas lasoo gudbiyay, ay musharixiintaasi heli doonin shahaadada xildhibaanimo, taas oo la micno ah inuusan shakhsigaasi ka mid noqon doonin baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, guddoomiye Cumar Dhageey oo ka hadlay xilliga ay dhici doonto doorashada madaxtinimada dalka, ayaa sheegay inuu dib u dhac jiro balse ay doorashadasi dhici doonto kahor inta uusan dhamaanin sanadkaan lagu jiro 2016-ka.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahayd inay dhacdo 30-ka bishaan aynu ku jirno ee November 30-keeda, balse waxaana haatan muuqata inuu fashilmay doorashadaasi inay ku qabsoonto xilligii hore loo asteeyay
Si kastaba, dib u dhacaan ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay tahay mid sii yareeyneeso kalsoonida dadka shacabka ah ay ka qabaan in doorashooyinka dalka ay waqtigooda ku dhacaan.